सर्लाहीमा १५ फिट अग्लो डम्फू ! – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
सर्लाहीमा १५ फिट अग्लो डम्फू !
माघ २३, २०७५ १५:४० मा प्रकाशित
जिल्लाको रानीगञ्जस्थित बोहोरेगङमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो डम्फुको उद्घाटन गरिएको छ । स्थानीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाका आर्थिक सहयोगमा निर्मित डम्फुको उद्घाटन भने २ नं. प्रदेशकी सांसद् सञ्चमाया थिङ तामाङ तथा तम्बा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय सचिव खोजराज गोलेद्वारा संयुक्त रुपमा गरेका छन् ।
प्रमुख अतिथि सांसद् सञ्चमाया थिङले डम्फु निर्माण कार्यले तामाङ पहिचानको इतिहासमा थप पाना थपेको बताउँदै यस्ता कार्यका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्ने सहयोगको निमित्त सदा तत्पर रहेको बताए । डम्फु भनेको तामाङ राष्ट्रको मौलिक बाजा हो । उद्घाटन गरिएको डम्फु ५० फिट ब्यास तथा १५ फिट अग्लो रहेको छ । डम्फु, डम्फुको प्रतीकात्मक अर्थ साथै तम्बा सम्बन्धी तथ्यहरु विशिष्ट अतिथि खोजराज गोलेले राखेका थिए ।
डम्फु निर्र्माण कार्य भने स्थानीय देउराली निवासी विवेक बोम्जनले गरेका थिए । त्यसक्रममा उनलाई स्थानीय तथा आयोजक समूहले सहयोग पु¥याएका थिए । स्थानीय कलाकारका गीत तथा नृत्यको साथै गायक टेक घिसिङ साथै गायिका अञ्जु लामाले आ–आफ्न प्रस्तुतिहरु राखेका थिए ।
आयोजक वैदेशिक रोजगार युवा समूहको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता भने स्थानीय अगुवा शुभलाल बोम्जनले गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन योञ्जनको साथै स्थानीय वडाध्यक्षहरु साथै विभिन्न सङ्घ संस्था तथा पार्टीका प्रतिनिधिहरु रहेका थिए ।
तस्बिर : खाेजराज गाेले तामाङ सिन्धुली